Ibhange linikela ngezindlu ezingu­70 NQOBILE MTOLO
IBHANGE iNedbank seligixabeze umkhandlu woMsunduzi ngezindlu ezingama-70 e-Ashdown,entshonalanga nedolobha uMgungundlovu maphakathi nesifundazwe. I-Ashdown iyingxenye yomkhandlu woMsunduzi eMgungundlovu. Ngesonto eledlule emhlanganweni wesigungu esiphakeme i-Executive Committee (Exco) obusehholo elikhulu lomphakathi (City Hall), kuvele ukuthi lesisivumelwano sisazodluliselwa emhlanganweni wamakhansela womkhandlu ukuze abane-
mibono eyehlukile mayelana naloludaba bakwazi ukuphakamisa uvo lwabo. UMnuz Ray Ngcobo ophethe izintambo zempucuko emkhandlwini woMsunduzi, uthe iNedbank ibatshele ukuthi ayisazidingi lezizindlu ezingama-70. Uthe: “Ophenyweni olwenziwe yiNedbank kuvele ukuthi kukhona abahlali abathathe umhlaba bakha imizi yodaka ngokungemthetho. Nathi ngokwethu njengomkhandlu sesilwenzile uphenyo ukuze sazi kahle izindleko es-
izifaka kuzo uma samukela lemizi September 18, 2013 NEWS evela kulelibhange. Emva kokuxoxmaritzburg isana sithole ukuthi njengomkhandlu kungumgomo wethu ukuhlinzeka abahlali amanzi nogesi.” Yize uMnuz Ngcobo ethe akanalo ulwazi mayelana nenani lalezizindbank, kuvele ukuthi wumkhandlu lu, uthe ukwamukela lesi sipho ozobamba iqhaza lokususa bonke sezindlu kuzosiza kakhulu abantu abahleli kulemizi ekuthuthukiseni umphakathi ngoba ngokungemthetho. umkhandlu unezinhlelo IMeya yomkhandlu uMnuz Chris zokuthuthukisa indawo yase-EdenNdlela ubonge wanconcoza wathi dale noVulindlela. kumele umkhandlu uzibongele kuleEncwadini evela ebhange iNedlibhange ngalokhu elikwenzile.
Sonke singawenza umehluko empilweni
YIKHO into emnandi njengokubona ilungu lomphakathi lisukumela ukusiza abanye abantu ngaphandle kokulindela inzuzo,kodwakubeyilonaelishayaowalo umxhaka ukuze lisize abanye. Okumnandi kakhulu futhi ukubona amalungu omphakathi engabuki ibala lomuntu ngaphambi kokwelula isandlaasizelaphokudingekakhona, kodwa asize ngoba ebona wonke umuntu odalwe nguNkulunkulu efana nomunye. Abaholi bahlale beshumayela elokuthi intuthuko ngeke ilethwe
nguHulumeni kuphela, kodwa iyolethwa wukubambisana ikakhulukazi uma kuza ngasekulweni nendlala nokuswelakala kwemisebenzi. Kuyangijabulisa ukuthi ngesonto enye yezintatheli zethu, uNksz Nosipho Mkhize, uzosibikela ngomfo wakoMphethethwa waseMbo entshonalanga yeTheku ohlangane nentokazi emhlophe yakhona endaweni yakwaMitchell nabanye basungula inhlangano ezosiza abantu abahlale becela imali emigwaqweni. Le nhlangano kayizukubasiza laba bantu basemigwaqweni ngokubapha imali kuphela, kodwa izobafundisa imisebenzi ezolekelela nasekukhucululeni udoti owona amagceke nobuhle bendalo jikelele. Yizo zonke izindaba lezi esizibophezeleekuzishicileleniemaphephandabeni omphakathi amaFEVER. Ngithanda nokubonga futhi kulabo asebeqalile ukusibhalela bethumela imibono yabo, bephawula nangezindaba esesike sazishicilela. Ngibonga nayo lentokazi yakoKhabazela ebengiyijube ukuthi ibambe usiba lokuba ngumhleli ngenyanga yabesifazane uNcwaba (Au-
LE NHLANGANO KAYIZUKUBASIZA LABA BANTU BASEMIGWAQWENI NGOKUBAPHA IMALI KUPHELA, KODWA IZOBAFUNDISA IMISEBENZI EZOLEKELELA NASEKUKHUCULULENI UDOTI OWONA AMAGCEKE NOBUHLE BENDALO JIKELE­ LE gust), nokungumsebenzi ewenze ngobukhulu ubunyoninco nokuzimisela. Ukugadla kwayo kufakazelwe yimibono ethunyelwe ngabafundi bephawula ngebezikuphakelwa yiyo lentokazi. Yilokho vele esasikucelile kwasekuqaleni ukuthi umphakathi uyisebenzise lenkundla. Nanxa sekubhalwe kabanzi ngezingozi ezinyantisa igazi ezidlule nemiphefumulo eminingi, njengeyokuqala eyenzeke ngaseShowe enyakatho yeKwaZulu-Natal lapho kushone khona izingane ziphuma emkhosini womhlanga KwaNongoma, neyeloli ephaphalaze yashayisa amatekisi amane eField’s Hill ePinetown entshonalanga yeTheku kwafa aban-
tu abangama-23, ngabe senza iphutha uma sithula singabakhalisi abashiywe yizihlobo. Sithi abaphephise, akwehlanga lungehlanga. Kwenzeka lokhu nje sisanda kubhala kuyona lengosi ukuthi kunezinceku zeNkosi ezithi sengathi sekufike isikhathi sokuthi kuhlaziywe izinto eziningi eziseBhayibhelini, njengokuthi konke okwenzeka emhlabeni kusuke kudaliwe. Noma singenawo amandla okutshela abefundisi bethu esibahloniphayongomsebenziwabo,besicela ukuthi sengathi labo abazizwayo, bangasheshe baqhamuke bacacise ngoba kuyanda okujabulisa oNyikinyibhoxo, okunele kwenzeke into embi bese besibuza ukuthi: “Uphi
loThixo wenu enimthandazayo?” Kodwa noma sibafishane kwezokholo, asikholwa wukuthi lezi zinhlekelele zazihlelwe nguSomandla. Ngeke. Sivumelana ngakho konke okusemandleni ethu noMnuz Willies Mchunu, onguNgqongqoshe wezokuThutha, ezokuPhepha koMphakathi nokuXhumana ukuthi umnikazi weloli okusolwa ukuthi belinamabhuleki angalungile, kufanele aphendule. Njengoba uMandulo (September) kuyiyanga yokuguba amaSiko, sengathi besingazihlola thina beNdlu kaMalandela ukuthi sikuphi namaSiko ethu. Ngabe sisawalandela nje? Abantu abadala bayaye bathi izinto eziningi azisasilungeli , ngoba sesalahla amasiko ethu salandela awezizwe, nawo awezizwe ayasigabha. Ngisuke ngikhumbule inkondlo ethi: “Laba bantu bayahlupheka, kwasho inyoni ihlezi phezu kwejele, sebelahle namasiko akubo balandela awezizwe, nawo awezizwe abafulathele”.Ngeshwalenkondloeseqoqweni likaJ. Matsebula yavalwa ngezikhathi zobandlululo. Singajabula uma kukhona onayo lenkondlo asisize ngayo